Crystal Palace xaq miyee u lahayd inay ceyriso Frank de Boer?
Sunday, May 27th, 2018 - 18:56:10
Tuesday September 12, 2017 - 14:44:56 in Wararka by MM Shooble
Crystal Palace ayaa rikoor ka dhigtayhoryaalka Premier League Isniintii markii ay shaqada ka ceyrisay tababare Frank de Boer ka dib afar kulan uu kooxda soo maamulay.
Xiddigii hore Holland ayaa shaqada kala wareegaySam Allardyce ka dib is casilaadii xagaagii aan ka soo gudubnay, laakiin wuxuu kooxda joogay77 maalmood ka hor inta aana la ceerin isniintiin,kadib qaab ciyaareed xun uu ku bilaawday.
Wararka qaar waxa ay sheegayaan in ciyaartoyda aan ku faraxsaneyn tababaraha iyo khilaafka madaxda kooxda intii lagu guda jiray soo xiri galintiiDe Boer, laakiin ugu danbeyntii waxa ay aheyd qaab ciyaareedka Palace oo aana fiicneen ugu danbeentiina madaxdana ay isku raaceenin ay shaqada tababare ka ceeriyaan De Boer.
, Sports Mole ayaa warbixin xiisa badan ka diyaarisay sheekadaan iyo place u qalmeen in la ceyriyaan De Boer?
Miyuu ahaa ninka saxda ah shaqada ku haboonaay?
Halkii laga waydiin lahaa in ay tahay mid xaq u leh in la ceyriyo De Boer, suurtogalnimada su’aasha dahabka waa in ay xaq u leeyihiin inay u magacaabaan meesha ugu horeysa.
Imaanshiyaha De Boer wuxuu marwalba u socdaa isbedel weyn oo ah qaabka iyo qaabka ciyaaraha marka la barbardhigo maalmaha Allardyce, waxaana la siiyay kaliya afar kulan si loo hirgeliyo tayadiisa,balse taasi oo ah aana wanaagsaneen oo ay ku dhaqaaqeen maamulka kooxda.
Dhanka kale, De Boer ayaa ku adkeysanaya inuusan bedeli doonin qaab ciyaareedkiisa cusub ee uu isku dayayay inuu keeno kooxda, inkastoo guul darro 3-0 ah ay ka soo gaartay kooxda Huddersfield Town si ay uga soo kabtaan khiyaanadooda waxay bilaabeen inay bilaabaanIs badal cusub.
Looma baahna in la filayay. Mid ka mid ah guuldarada – xitaa afar guuldarro isku xigta – waa inaysan marnaba ku filneyn inay bedelaan falsafadda maamulaha, iyo haddii guddiga sare ay filayaan wax kale markaa waa kuwa dambi ah inay noqdaan kuwo nasiib darro ah.
De Boer ayaa ku soo biiray Ajax, halka Johan Cruyff uu ahaa macalin ka hor inta uusan u dhaqaaqin wadada la midka ah ee halyeeyga reer Holland, isagoo ciyaaraya kubada cagta Ajax iyo Barcelona, ​​halkaasoo uu Cruyff si aad ah u shaqeynayay.
Waa falsafad udub dhexaad u ah dadka ugu khibrad badan, iyo haddii guddiga Palace aysan dooneynin inay bedelaan qaab ka gudbinta ‘Total Football’ marka hore – ama wax walwal ah oo ku saabsan inay kooxdu ku haboon tahay – markaa waa inay eegtey meelo kale.
Calaamadaha digniinta waxay ahaayeen kuwo dhamaantoodba aana la saadaalin karin Palace aysan fududeyn ciyaartoydaayaa ku adkaatay in ay mar walba la qabsadaan qaab ciyaareedka De Boer
Qaar ka mid ah ciyaartoyda sida Scott Dann, Damien Delaney, James Tomkins iyo Joel Ward ayaa heysta awoodooda shaki la’aan, laakiin ma aysan noqon laheyd doorashooyin badan oo tababarenimo ah marka ay doonayaan inay ka ciyaaraan daafaca, waxaana ay aheyd inay afar jeer ku guuleystaan ​​Allardyce marka loo fiiriyo De Boer. .
Maalgashiga adag ayaa loo baahan lahaa inta lagu jiro xagaaga haddii Palace ay tahay inay bedesho, laakiin waxay saxiixeen kaliya laba ciyaaryahan oo bedel u ah Jairo Riedewald iyo Mamadou Sakho – halka Ruben Loftus-Cheek iyo Timothy Fosu-Mensah ay ku soo biireen.
Loftus-Cheek oo 21 jir ah ayaa ah maskax kale oo kooxda yimid Sakho oo asna Palace mar kale ka soo muuqday , laakiin taasi ma ayna keenin in ay boos fiican ka joogaan kala sareenta Premier League.
Xaqiiqda ah guddiga ma aysan kala tagin maamulahooda xulashada ciyaartoyda horey ugu ciyaari jiray ama ciyaartoyda ay la soo saxiixdeen xagaan
Taariikhda Premier League tan oo kale ma ayna ka dhicin?
De Boer ayaa si aad ah u dareemaya inuu si aad ah u dareemayo inuusan marnaba la siinin fursad uu ku hirgeliyo qaab ciyaareedkiisa kooxda – xitaa hadii kooxdu aysan waligeed u muuqanin inay u qalantay – laakiin natiijada garoonka ayaa weli ah mid maamulayaasha u diiday in ay fursad siiyaan tababaraha.
Guddiga Palace ayaa sameeyay taariikhda ugu qatarsaneed horyaalka Premier League marka laga reebo kulamada banaanbaxyada De Boer afar kulan xilli ciyaareedka cusub, laakiin taasi waxay aheyd ka dib markii ninka reer Holland uu sheeganayay rikoor aan loo baahneyn.
Kulankii axada ee guul darradii 1-0 ee Burnley ee ka dhacay Turf Moor ayaa cambaareeyay Eagles guuldaradii afaraad oo isku xigta oo ay u sii dheertahaygoolal la’aan – kooxda ugu horeysay ee Premier League ayaa abid ugu liitay bilowgeedii xilli ciyaareedkii ugu horeysay tan iyo markii Preston North End 1924-kii.
Waa xisaabin adag oo laga yaabo in ay cabsi galiso guddiga fulinta si ay u jiidaan kicinta, inkastoo warbixinta la rumeysan yahay markaas go’aankii lagu ceyriyay De Boer ayaa ahaa dhamaantood laakiin ka hor guuldaradii Burnley.
Kooxda Eagles ayaa dhab ahaantii ka fiicnayd Turf Moor – iyadoo loo ogolaaday tababaraha Burnley Sean Dyche – laakiin markii ay roobabku da’een, Lee Chung-yong ayaa isdaba mariyay daqiiqadii seddexaad, taasoo keentay in De Boer uu fursad u helin inuu sii joogokooxda.
Hase yeeshee, xilli ciyaareedka weli waa xilli ciyaareed bilaaw ah, dabcan, hal guul oo ay gaarto Palace ayaa ka dhigin inay ka baxdo boosaska heerka labaad, inkastoo ay bilaabanayaan cabsi weyn, taasoo ka dhigeysa inay ka garab ciyaaraan Bournemouth, kooxda kaliya ee aan weli dhibic ka helin Premier League.
Si kastaba ha ahaatee, rajada laga qabo inay ka tagaan waxa ay si aad ah u waxyeeleynayaan waqtigaan – iyo abaalmarinta kubbada cagta ee faa’iido badan – guddiga Palace ayaa dareemay baahida loo qabo in la ciyaaro 34 kulan oo xilli ciyaareedkaan.
Inta badan way isbedeli karaan xilligan, laakiin Palace waxay u badan tahay inay u baahnayd ugu yaraan toddobaadyo intaa ka badan intaan De Boer dhab ahaantii ku guulaysan inay u ciyaaraan sida uu rabo, marxaladdana waxaa laga yaabaa inay halis ugu jiraan in laga yareeyo dhibka.
Dhibaatooyinka adag ee ka soo horjeeda ayaa laga yaabaa inay sidoo kale keeneen madaxda sare ee hadda; hadii Palace aysan awoodin inay wax ka helaan kulamada Huddersfield, Liverpool iyo Swansea ka dibna waxaa laga yaabaa inay ka faa’ideystaan ​​inay ka horimaanayaan Southampton, Manchester City, Manchester United iyo Chelsea afarta kulan ee soo socota ee horyaalka.
Si kastaba ha noqotee, bilawga adag ee De Boer ayaa bedelaya, hadana guddiga fulinta ayaa si dhaqso ah u doonaya in ay magacaaban tababar kale oo cusub.
Waxaa jiray waqti markii De Boer loo arko mid ka mid ah ciyaartoyda da’da yar ee kubadda cagta kubada cagta ka dib markii Ajax ay kula guuleysatay koobab badan.
De Boer wuxuu ku guuleystay horyaalka Eredivisie xilli ciyaareedkiisii ​​ugu horeysay ee tababare ahaan, waxaana uu noqday tababaraha ugu horreeya ee koobkan ku guuleysta afar xilli ciyaareed oo isku xigta, madaama uu guushii ugu horeysay ee uu ku soo dhamaaday.
Sidoo kale wuxuu ahaa markii ugu horeysay ee Ajax ay ku guuleysatay afar horyaal oo Eredivisie ah, waxaana ay ku qaadatay De Boer ilaa sagaal koob oo ay ku jiraan koobab kala duwan ee Holand,Rikoor kale uu horay u sameeyayCruyff, oo ka mid ah shaqsiyaadka ugu guulaha badan taariikhda horyaalka Dutch.
Ajax ayaa ku dhameysatay kaalinta labaad ee xilli ciyaareedka 2014-15, laakiin Ajax ayaa ku dhameysatay xilli ciyaareedkii hore ayadoo 17 dhibcood ka hooseysa kooxda heysata horyaalka PSV, ka hor inta aysan ka maqnaanin kooxda ay xafiiltamaan mar kale maalinta xigta ee xilli ciyaareedka xigay.
De Boer ayaa si dhaqso ah ugu biiray Inter Milan ka dib markii uu is casilay, lakiin waxa uu joogay San Siro wax yar madaama xirfadiisa ay ku bilaabatay inay hoos u dhacdo, waxaana uuna 85 maalmood maamulaayaykooxda reer Talyaani ka hor inta aan la ceyrin kuankii 12aad ee horyaalka. Serie A.
kadib waqtigaa De Boer ayaa shaqada kala wareegayAllardyce waxaa loo arkey inuu ahaa afduub loo geystay Palace, laakiin kaliya wuxuu ku guuleystay inuu sii joogo labadii shaqo ee danbe isku geenta 162 maalmood ,wuuna macsalaameeyay Selhurst Park.
Yaa maamuli doono kursigaPalace?
Roy Hodgson waa ninka la filayo inuu la wareego shaqada kooxda place , inkastoo tababarihii ugu danbeeyay uusan aheyn mid ku faraxsan sida England ay ugu soo fashilantay Euro 2016 ee Iceland – isagoo ku guuldareystay inuu ka soo baxo wareega group-yada koobkii adduunka Koob labo sano ka hor.
Palace ayaa ku soo laaban doona Hodgson waa tababare qibrad leh, inkastoo uu yahay mid ka mid soo maamulay afar kooxood oo kala duwan oo Premier League ah ka ciyaaray.
Tababarihii hore ee Liverpool Brendan Rodgers ayaa ku soo laabtay tababarka kooxda Fulham, Liverpool iyo West Bromwich Albion, iyadoo Southampton ay ku soo xigto seddexda seddexaad ee Premier League, ka dib markii ay ka badiyeen EFL Cup kooxda Huddersfield. xilli.ciyaareedkan.
Si kastaba ha ahaatee, Hodgson waa tababare awood u leh qaab ciyaareedkiisa oo ku haboon ciyaartoydiisa, waxaana Palace rajeyneysa inuu 70 jirkaan saameyn la mid ah u leeyahay waqtigiisa West Brom.
Hodgson ayaa ka mid ahaa ciyaartoydii ka tagtay horyaalka heerka goolal la’aanta markii Hodgson la wareegay bishii Febraayo 2011, laakiin wuxuu ku hogaamiyay seddexda sanno ee ugu sareysa horyaalka, shan kulan oo guul darro ah iyo shan barbar dhac 12 kulan uu soo maamulayayaa kor u qaaday kaalinta 11aad.
Hodgson ayaa ka fiicneyd sannad ka dib si uu u hogaamiyo West Brom markii ugu horeysay ee ay ku dhameysato kaalinta koowaad ee horyaalka tan iyo 1981, isagoo shaqada England la wareegay.
Crystal Palace xaq miyee ulahayd inay ceyriso Frank de Boer?
FADLAN NALAWADAAG SXB FIKIRKAAGA MHDSND